सप्तरंग Archives - Page4of 22 - Naya Patrika
करिश्मा किन बनिनन् आमा ?
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १९ चैत - झन्डै एक दशकपछि अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर अभिनित फिल्म ‘हिरोज’ चैत २३ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदै छ । फिल्मबारे आइतबार जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित अभिनेत्री करिश्माले हिरोजमा आफ्नो ‘छुट्टै’ भूमिका भएको बताइन् । लामो समयदेखि करिश्मालाई फिल्ममा प्रस्ताव नै आएनन् त ? यो जिज्ञासाको जवाफमा उनले ‘तमाम अफर आएको, तर सुहाउँदो...
लाहोर डायरी : जहाँ महिलाले सर्टिफिकेट सिरानीमै थन्क्याउँछन्
वीरेन्द्र ओली , काठमाडाैँ, १९ चैत - हेलो ! कतैबाट आवाज आयो । पुलुक्क मात्रै के हेरेका थियौँ हामीले ठम्याइहाल्यौँ, हामीलाई लिन आएका पास्कितानी साथी यिनै हुन् भनेर । पातलो शरीर, सुकिलो अनुहार, आँखामा कालो चस्मा । उनीसँगैका अर्का साथी पनि उस्तै पातलो शरीरका, तालुमा थोरै कपाल भएका । पाकिस्तानी उर्दू लवजमा हालखबर सोधे । यसअघि धेरैपटक...
बजारमा पत्थरै पत्थर
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १८ चैत - साहित्यकार गीता रेग्मीद्वारा लिखित नियात्रा संग्रह ‘पत्थरै पत्थर’ लोकार्पण गरिएको छ । काठमाडौंको सर्वनाम थिएटरमा सार्वजनिक गरिएको नियात्रा संग्रह बर्मा, थाइल्यान्ड र मलेसियाको यात्रा वर्णनमा केन्द्रित छ । कृति नियात्राकारको निजात्मक राग र अनुभूतिपरक छ । प्रा. राजेन्द्र सुवेदी, साहित्यकार गीता केशरी, डा. सावित्री कक्षपती, नियात्राकार मोहन चापागार्इं, साहित्यकार राजकुमार...
तीन फिल्म बनाउँदै अनुष्का
एजेन्सी , काठमाडाैँ, १८ चैत - बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री अनुष्का शर्माले प्रोडक्सन क्षेत्रमा हात हलेर अहिलेसम्म तीन फिल्म निर्माण गरिसकिन् । यतिवेला उनी थप तीन फिल्म बनाउने तयारीमा जुटेकी छन् । ताजा जानकारीअनुसार अनुष्काले आफ्नै ब्यानरमा निर्माण हुने तीन फिल्मको नाम घोषणा गर्दै छिन् । उनका अनुसार यी तीनै फिल्म फरक–फरक विधाका हुनेछन् । उनले अभिनय...
‘तितलीसँगे दोस लगाएव’ लोकार्पण
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १८ चैत - पत्रकार सुजीतकुमार झाद्वारा मैथिली भाषामा लेखिएको बालकथा संग्रह ‘तितलीसँग दोस लगाएव’को लोकार्पण गरिएको छ । शनिबार पूर्वमन्त्री शत्रुघन महतो र वरिष्ठ मैथिली साहित्यकारद्वय रामभरोस कापडी तथा अयोध्यानाथ चौधरीले बालकथा संग्रहको जनकपुरमा लोकार्पण गरेका हुन् । प्राथमिक विद्यालयमा मैथिली भाषाको पाठ्यक्रम अभाव रहेका वेला पत्रकार झाले लेखेको बालकथा संग्रह त्यसमा सहयोगी...
जोखिम मोलेर गर्भवतीको सेवा
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १८ चैत - मानव सेवालाई नै साँचो सेवाका रूपमा लिइन्छ । चाहे त्यो भौतिक होस्, भावनात्मक होस्, आर्थिक वा अन्य कुनै । जुनसुकै रूपमा पनि विनास्वार्थ गरिएको सेवा अमूल्य हुन्छ । हामीले जीवनमा अनेक प्रकारका सेवाबारे सुन्न वा देख्न पाएका हुन्छौँ । यहाँ जुन खालको निस्वार्थ मानव सेवाको उल्लेख गरिएको छ, त्यस्तो सेवा...
सँझ्यामा तीन पुस्ताका कवि
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १८ चैत - काठमाडौं÷ कला र कविताका लागि साहित्यिक अभियान गरिरहेको सँझ्यामा फरक धारका तीन कवि प्रस्तुत भए । २०४० कोे दशकदेखि कवितामा सक्रिय दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’, साठीको दशकको पूर्वाद्र्धदेखि कवितामा लागिपरेका युवाकवि हेम प्रभास र साठीको दशकपछि कवितामा संघर्ष गरिरहेकी शान्तिप्रिया वन्दनाले फरक स्वादका कविता प्रस्तुत गरे । कवि किशोरले कविता वाचनका...
फिल्म एडिटिङमा साहिलको सान
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - केही वर्षयता फिल्म एडिटरका रूपमा निकै व्यस्त छन् साहिल खान । एरिना मल्टिमिडिया जमलबाट एडिटिङ र ग्राफिक्स कोर्ष गरेपछि सन् २००६ देखि फिल्म एडिटिङ थालेका उनले अहिलेसम्म थुप्रै फिल्ममा आफ्नो कला देखाइसकेका छन् । फिल्म सम्पादन, ग्राफिक्स तथा प्रोमो निर्माणमा साहिलले आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएका छन् । त्यसैले अधिकांश निर्देशक–निर्माता...
छक्कापन्जा, विपिन र सिर्जना उत्कृष्ट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - दोस्रो फान अवार्ड–०७३ शाहलाई दीर्घ साधना सम्मान, प्रदीप र साम्राज्ञी वर्ष लोकप्रिय, सुवेदी र लम्साललाई पत्रकारिता विशेष सम्मान नेपाल चलचित्र कलाकार संघ (फान) ले दोस्रो फान अवार्ड–०७३ शुक्रबार राजधानीको आर्मी अफिसर्स क्लबमा सम्पन्न गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न अवार्ड समारोहमा वरिष्ठ चलचित्रकर्मी नीर शाहलाई संघले...
सरकार ! तेरो दृष्टि छ ?
प्रकाश गुरागाईं, काठमाडाैँ, १७ चैत - विवाह गर्नुअघि नै कसैले सन्तान नजन्माउने निर्णय गर्ला ? स्वाभाविक रूपमा गर्दैनन् । तर, यस्तै अचम्मको निर्णय गरे काठमाडौं तारकेश्वरका दीपक सापकोटा र कास्कीकी सरिता आचार्यले । सन्तानको रहर नभएर उनीहरूले यसो गरेका थिएनन् । आफूहरूले भोगेको पीडा सन्तानमा सार्न चाहँदैनथे । उनीहरू दुवै दृष्टिविहीन हुन् । दृष्टिविहीन हुनुको चरम...
सेनका एकसाथ चार नाटकसंग्रह
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - साहित्यकार सुब सेनद्वारा लिखित चारवटा नाटकसंग्रह एकसाथ सार्वजनिक गरिएका छन् । दायित्व वाङ्मय प्रष्ठिानले प्रकाशन गरेको सेनका ‘सहिद कृष्णलाल अधिकारी’, ‘मैनाबहादुर खण्डमान’, ‘लखन थापा जयसिंह चुमी’ र ‘सहिदसभा’ शुक्रबार वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार भैरव रिसाल, दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामप्रसाद पन्तलगायतले विमोचन गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रा.डा. गोविन्दमान सिंह कार्की,...
आँखा खोलिदिने लेखक
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - एकपटक रुसी लेखक टल्सटोयसामु एक युवक आए र भने, ‘महाशय, तपाईं मलाई सहायता गर्नुस् । म धेरै चिन्तित छु । मसँग यतिवेला फुटेको कौडी पनि छैन ।’ टल्सटोयले उनको समस्या सुनेपछि गम्भीर हुँदै भने, ‘तिमी चिन्ता नलेऊ युवक, मेरो एउटा निकै मिल्ने साथी व्यापारी छ । उसले तिमीलाई पक्कै सहयोग...
सुदूरका कथा आउनै बाँकी छन्
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १६ चैत - ‘ऐलानी’ बादी समुदायबारे लेख्नुभयो । एउटा समुदायको भएर अर्को समुदायको कथा लेख्दा कत्तिको न्याय गर्न सकिँदो रहेछ ? तपाईंलाई आफूले न्याय गर्न सकेकोजस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ? कुनै अन्य समुदायको कथा लेख्नु चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । बजारमा राम्रा लेखकका पुस्तकहरू पनि यही कारणले दुर्घटनामा परेका छन् । मेरो सवालमा त्यस्तो...
इन्गेजमेन्टबारे इशाको खण्डन
एजेन्सी , काठमाडाैँ, १६ चैत - बलिउड अभिनेत्री इशा गुप्ताले फेसन डिजाइनर निखिल थम्पीसँग आफ्नो इन्गेजमेनट भएको खबरको खण्डन गरेकी छिन् । इशाले आफू र निखिल निकै नजिकका साथी मात्रै भएको दाबी गर्दै आफूहरूबीच अन्य सम्बन्ध नरहेको उल्लेख गरेकी छिन् । ‘निखिल मेरो एकदमै मिल्ने साथी हो । त्योभन्दा हामीबीच अर्काे सम्बन्ध छैन,’ केही दिनयता आफ्नोबारे...
माइकलपुत्री पेरिस समलिंगी प्रेममा
एजेन्सी , काठमाडाैँ, १६ चैत - चर्चित पपस्टार स्वर्गीय माइकल ज्याक्सनकी छोरी पेरिस ज्याक्सनले आफू समलिंगी भएको खुलासा गरेकी छन् । १९ वर्षीया पेरिसले यो पनि खुलाइन् कि उनी ब्रिटिस मोडल तथा अभिनेत्री कारा डेलेवेनसँग रिलेसनसिपमा छिन् । यो थाहा पाएपछि पेरिसका भाइ प्रिन्सले भनेका छन्, ‘यदि माइकल ज्याक्सन जीवित हुन्थे भने यो थाहा पाएर गर्व...
शत्रु गतेको सक्सेस केक
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १६ चैत - फिल्म शत्रु गतेले ६ दिनमा काठमाडौं भित्रबाट ३ करोड २५ लाख कलेक्सन गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबारबाट प्रदर्शनको दोस्रो हप्ता प्रवेश गर्न लागेको शत्रु गते टिमले सक्सेस केक काट्दै उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो । वितरक कम्पनी बिके फिल्मस् र एफडी कम्पनीले महजोडीको कमब्याक फिल्मको विजनेश रिपोर्ट सार्वजनिक...
असार २९ मा ड्रिम गर्ल
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १६ चैत - प्रेमकथानक फिल्म ड्रिम गर्लको प्रदर्शन मिति तय गरिएको छ । ऋषिराज आचार्यको लेखन, निर्माण र निर्देशनमा बनेको फिल्म असार २९ गते दर्शकमाझ आउने पक्का भएको छ । झन्डै दुई करोड लगानीमा बनेको फिल्ममा आकाश श्रेष्ठ, आश्मा गिरी, विल्सनविक्रम राई, सरोज खनाल, अर्जुन श्रेष्ठ, शिशिर भण्डारी, पूजा पराजुली, शूरवीर पण्डितलगायत कलाकारले...
गुन्डुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्यालय
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १६ चैत - सुविधासम्पन्न संरचना र गुणस्तरीय शिक्षासहित काठमाडौं वल्र्ड स्कुल यसै शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालनमा आएको छ । स्तरीय शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी मुलुकबाहिर जानुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर वल्र्ड स्कुल सञ्चालनमा ल्याएको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासहित सञ्चालनमा आएको यस स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले भविष्यमा आउने चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने दाबी गरिएको...
माउन्ट बेटनको आत्मविश्वास
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १६चैत - कुनै समय कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने साम्राज्यको परिचय बनाएको इङ्ल्यान्डमा नौसेनाका अधिकारीको छनोटका लागि अन्तर्वार्ता चलिरहेको थियो । त्यसका लागि थुप्रै उम्मेदवार सम्मिलित थिए । ती अनेकौँ उम्मेदवारमध्ये माउन्ट बेटन नाम गरेका व्यक्ति पनि थिए । पालैपालो एकपछि अर्को व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि बेटनको पालो आयो । आफ्नो पालो आएको जनाउ पाएपछि...
डाक्टर बन्ने सपना बुनेकी केकी कसरी बनिन् एक्टर ?
कृष्ण आचार्य, काठमाडौं, १६ चैत - सपना आ–आफ्नै हुन्छन् । रहर फरक हुन्छन् । केही गर्ने, केही बन्ने सोच हरेकको हुन्छ । कतिपय सपना हामी आफैँ देख्छौँ । कतिपय समय र परिवेशले देखाउँछ । अथवा, देख्न बाध्य बनाउँछ । मोडल, अभिनेत्री हुँदै निर्मात्रीको भूमिकामा समेत उभिएकी केकी अधिकारीको पनि एउटा सपना थिया, आफैँले देखेको । सानैदेखि...
सेनलाई जानकी साहित्य पुरस्कार
नयाँ पत्रिका, गुल्मी, १३ चैत - साहित्यकार सूब सेन अर्थात सूर्यबहादुर सेनलाई ‘जानकी साहित्य पुरस्कार’ प्रदान गरिने भएको छ । नेपाली भाषा, साहित्यका दीर्घसेवक, आख्यानकार, नियात्राकार, नाटककार एवं कवि सेनलाई किरण पुस्ताकालय तम्घास गुल्मीले पुरस्कार प्रदान गर्न लागेको पुस्तकालयका सचिव दिन पन्थीले जानकारी दिए । पुरस्कार आगामी २०७५ सालको मोती जयन्तीका दिन प्रदान गरिनेछ । साहित्यप्रति...
मास्टर बन्ने धोको थियो जीवनभर विद्यार्थी भएँ : भट्टराई
नवीन प्यासी, काठमाडाैँ, १५ चैत - सपना नै भएन भने त मानिस हुनुको औचित्य नै के रह्यो र ! सानो होस् या ठूलो हरकोहीसँग सपनाहरू हुन्छन् । हुन जरुरी पनि छ । सपनाले नै त हो नि मान्छेमा आशाको बिउ उमार्ने । जसले मान्छेलाई मुर्दा हुनबाट जोगाउँछ । कहिलेकाहीँ मान्छेको जीवनमा यस्ता दिनहरू पनि आइदिन्छन् ।...
अंग्रेजी पढाउँदा बुबा जेल पर्नुभयो : प्रा.डा. शर्मा
भवानीश्वर गौतम/ नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, १४ चैत - प्रा.डा. सुरेशराज शर्माको पालामा स्लेटमा खरीले लेखेर पढ्नुपथ्र्यो । पेन, पेन्सिल र कागज आइसकेको थिएन । पढ्नैका लागि उनी सिन्धुलीबाट जनकपुर गएपछि बिस्तारै पढाइका ती सामग्री देखे । नेपालका पुस्तक नपाए पनि जनकपुरमा भारतीय पुस्तक पढे । उनका बुबाले छोरालाई अंग्रेजी पढाउन ‘मधेस’बाट झिकाएर शिक्षकसमेत राखे । तर, शासकले उनी...
चर्चित फिल्म ‘कृ’ का निर्माता गिरी पक्राउ
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, १४ चैत - प्रहरीले भर्खरै प्रदर्शित चर्चित फिल्म ‘कृ’का निर्माता सुवास गिरीलाई पक्राउ गरेको छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐनविपरीतको गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार उनीविरुद्ध ०४३ मा बनेको ‘सम्झना’ फिल्मको ‘उकालीमा अघि–अघि’ बोलको गीत विनाअनुमति चोरेको आरोप छ । उनले उक्त गीत फिल्म ‘कृ’मा...
यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध ऐश्वर्या
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, १४ चैत - कलिउड नायिका ऐश्वर्या राय बच्चनको सुन्दरता र पर्सनालिटीले प्रायलाई आकर्षित गर्ने गर्छ । यतिवेला ऐश्वर्या छोरी आराध्या र पति अभिषेक बच्चनका साथ अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा छिन् । सोही क्रममा नायिका ऐश्वर्याले सामाजिक सञ्जालमा चलेको ‘ह्यास ट्याग मी टु’ अभियानलाई समर्थन गरेकी छिन् । यो अभियानअन्तर्गत संसारभरका महिलाहरूले यौन दुव्र्यवहारका घटना सेयर...
विराटलाई भेट्न बिदा लिइन् अनुष्काले
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, १४ चैत - बलिउड नायिका अनुष्का शर्मा अचेल फिल्म ‘सुई धागा’को सुटिङमा व्यस्त छिन् । उनी सुटिङका लागि दिल्लीमा छिन् । यही क्रममा उनलाई हेर्न सयौँ फ्यान सुटिङ स्पट पुगे । अनुष्का शर्मा र वरुण धवनलाई हेर्न प्रशंसकहरूले घन्टौँ कुरे । तर, यसबीचमा अनुष्काले नयाँ योजना बनाइन । बिहेपछि अनुष्का फिल्मको सुटिङका लागि...
प्रियंकाको जुत्ताको मूल्य एक लाख
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, १४ चैत - प्रियंका चोपडालाई बलिउडकी फेसनेबल हिरोइनको रूपमा लिइन्छ । प्रियंका कपडाका साथै फुटवेयरकी पनि सौखिन छिन् । यही कारण पनि प्रियंका चर्चित ड्रेससँगै चर्चित डिजाइनरले बनाएका जुत्ताको साथमा देखिन्छन् । उनी प्रायः नयाँ जुत्तामा देखिने गर्छिन् । बलिउडमा एकपटक लगाएको कपडा दोस्रोपटक लगाउने चलन कम छ, तर प्रियंका चोपडा ती अभिनेत्रीमध्ये...
पहिचानका जन्मदाता सैनिक
प्रकाश गुरागाईं, काठमाडाैँ, १३ चैत - चार वर्षअघि पहिचान पुरस्कार स्थापनाको घोषणा हुँदा केही मान्छे सशंकित भए । कतिले त्यसलाई जातीय पुरस्कारको आरोप पनि लगाए । तर, सन् २०१८ को पुरस्कार ‘भुइयाँ’ लेखक यज्ञशले पाएपछि ती आरोप खारेज भए । पहिचान पुरस्कार संसारका धेरै पुरस्कारभन्दा फरक छ । विश्वका कतिपय सम्मानित पुरस्कार प्रायः व्यक्तिकै नाममा खडा...
करिनाको ब्रान्ड रवाफ
एजेन्सी , काठमाडाैँ, १३ चैत - बलिउड अभिनेत्री करिना कपुर फिल्मबाहेक निजी जिन्दगीका कारण पनि निकै चर्चामा आइरहने गर्छिन् । कहिले सहरका साथीहरूसँग पार्टीमा जान्छिन् त कहिले छोरा तैमुरका साथ घरमा बस्ने गर्छिन् । अहिले फेरि करिना फिल्मभन्दा अरू कारणले चर्चामा छिन् । जसमा उनलाई जिम हलभन्दा बाहिर देखिएको छ । करिनालाई दैनिकजसो व्यायामपछि फर्किने क्रममा...
हिल्टनको २१ करोडको आैँठी हराएपछि
एजेन्सी , काठमाडाैँ, १३ चैत - अमेरिकन टेलिभिजनकर्मी तथा महिला व्यवसायी पेरिस हिल्टनले एक क्लबमा नाच्दानाच्दै आफ्नो २० लाख डलर पर्ने औँठी हराएकी छन् । लगभग २१ करोड नेपाली रुपैयाँ पर्ने उक्त औँठी खोजविनका क्रममा भेटिएको छ । एक वेबसाइडसँगको कुराकानीमा त्यहाँ उपस्थित मान्छेहरूले बताए कि उनी हात हल्लाउँदै नाचिरहेकी थिइन् । नाच्ने क्रममा उनको महँगो...
मिस्ड फ्लाइटले बनेका सुपरस्टार
एजेन्सी , काठमाडाैँ, १३ चैत - असफलताको अर्थ यो होइन कि सबैथोक समाप्त भयो ! बरु जिन्दगीमा अन्य अवसरहरू इंगित भएका हुन सक्छन् । भनिन्छ, मानिसको जीवनमा एउटा ढोका बन्द भयो भने पाँचवटा नयाँ ढोका खुल्छन् । मान्छेले अवसर चिन्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई आफ्नो बनाउन सक्नुपर्छ । स्वर्णिम अवसर हरेकको जिन्दगीमा आउँछ र त्यसले कठिन परिस्थितिलाई...
सर्वनाममा एकल नाटक महोत्सव
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १३ चैत - नाटक र कला क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएको सर्वनाम थिएटरले अन्तर्राष्ट्रिय एकल नाटक महोत्सव गर्ने भएको छ । विगतमा पनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्सवहरू आयोजना गरेको सर्वनामले आगामी अप्रिल २ देखि ५ तारिखसम्म अन्तर्राष्ट्रिय एकल नाटक महोत्सव गर्न लागको हो । नाटक महोत्सवमा बेलायत, फ्रान्स, भारत, बंगलादेश, हङकङ, जर्मनी, फिलिपिन्स,...